कोरोना अपडेट : विश्वमा १ करोड ३२ लाख बढी संक्रमण मुक्त, कति पुगे मृतक र संक्रमित ? « Lokpath
11 August, 2020 11:55 pm
कोरोना अपडेट : विश्वमा १ करोड ३२ लाख बढी संक्रमण मुक्त, कति पुगे मृतक र संक्रमित ?
प्रकाशित मिति : 11 August, 2020 11:55 pm
काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को कारण यो समाचार तयार पार्दासम्म ७ लाख ४१ हजार ७ सय ३० जनाको ज्यान गएको छ । हालसम्म विश्वभरका २ करोड ३ लाख ८८ हजार १३ जनामा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ । हालसम्म विश्वभरबाट १ करोड ३२ लाख ८२ हजार ८ सय ३१ जना कोरोना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् । भने संक्रमितमध्ये ६४ हजार ६ सय ९१ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको वल्डोमिटरको तथ्यांकले देखाएको छ ।
मेक्सिकोमा बितेको २४ घण्टामा ५ हजार ५ सय ५८ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या ४ लाख ८५ हजार ८ सय ३६ पुगेको छ । हालसम्म कोरोनाको कारण ५३ हजार ३ जनाको ज्यान गएको र पछिल्लो २४ घण्टामा मात्र ७ सय ५ मृतक थपिएको वल्डोमिटरको तथ्यांकले देखाएको छ । हालसम्म मेक्सिकोमा ३ लाख २७ हजार ९ सय ९३ जना कोरोना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् भने संक्रमितमध्ये ३ हजार ६ सय ८३ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको वल्डोमिटरको तथ्यांकले देखाएको छ ।
पेरुमा हालसम्म पेरुमा २१ हजार २ सय ७६ जनाको कोरोनाको कारण ज्यान गएको छ । त्यस्तै ४ लाख ८३ हजार १ सय ३३ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । त्यस्तै हालसम्म ३ लाख २९ हजार ४ सय ४ जना कोरोना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् भने संक्रमितमध्ये १ हजार ४ सय ८४ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको वल्डोमिटरको तथ्यांकले देखाएको छ ।
त्यस्तै चिलिमा हालसम्म कोरोनाको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या १० हजार १ सय ७८ पुगेको छ । चिलिमा बितेको २४ घण्टामा १ हजार बढीमा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या ३ लाख ७६ हजार ६ सय १६ पुगेको छ । त्यस्तै संक्रमितमध्ये ३ लाख ४९ हजार ५ सय ४१ जना कोरोना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएको वल्डोमिटरको तथ्यांकले देखाएको छ । भने संक्रमितमध्ये १ हजार २ सय ६८ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै स्पेनमा यो समाचार तयार पार्दासम्म कोरोनाको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या २८ हजार ५ सय ८१ पुगेको छ । हालसम्म ३ लाख ७३ हजार ६ सय ९२ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको र संक्रमितमध्ये ६ सय १७ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ । वल्डोमिटरको तथ्यांक अनुसार स्पेनमा बितेको २४ घण्टामा स्पेनमा कोरोनाको कारण थप ५ जनाको ज्यान गएको र ३ हजार ६ सय ३२ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।